Filaharana lehibe indrindra amin'ny tantara: nanampy an'i United jet 270 ny fiaramanidina Boeing sy Airbus ho an'ny andiany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Filaharana lehibe indrindra amin'ny tantara: nanampy an'i United jet 270 ny fiaramanidina Boeing sy Airbus ho an'ny andiany
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny "United Next" dia misy ny fanampiana 200 Boeing 737 MAX sy 70 Airbus A321neo ary koa ny drafitra hamerenana ny 100% sisa tavela amin'ny andiany lehibe, fiaramanidina tery hanova ny traikefan'ny mpanjifa sy hamorona sonia vaovao anatiny - fiakarana 75% eo ho eo seza isaky ny fialana any Amerika Avaratra, fitoeram-bokatra lehibe kokoa, fialamboly miverina amin'ny seza isaky ny seza sy WiFi misy indostrialy haingana indrindra.
United dia hampiakatra ny isan'ny seza misy manerana ny tambajotran-tokantranony efa ho 30% isaky ny fiainganana ary hanolo fiaramanidina rezionaly kilasy tokana 200 misy fiaramanidina lehibe kokoa.
Ny kaomandy antenaina hamoronana asa be karama sy miray amin'ny 25,000 any United, mampihena ny fandefasana gazy karbonika isaky ny seza ary mandray anjara mitentina $ 50 miliara isan-taona manoloana ny toekaren'i Etazonia amin'ny 2026.
Raha ampiarahina amin'ny boky kaomandin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'izao fotoana izao, United dia manantena ny hanampy fiaramanidina vaovao mihoatra ny 500, anisany fiaramanidina vaovao iray isaky ny telo andro amin'ny 2023 fotsiny.
United Airlines androany dia nanambara ny fividianana fiaramanidina Boeing sy Airbus vaovao miisa 270 - ny filaharana mitambatra lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary ny lehibe indrindra nataon'ny mpitatitra tsirairay tao anatin'ny folo taona lasa. Ny drafitra 'United Next' dia hisy fiatraikany amin'ny traikefan'ny mpanjifa ary antenaina hampiakatra ny habetsaky ny seza misy isaky ny fiainganana an-trano efa ho 30%, hampihena be ny gazy karbonika isaky ny seza ary hamorona asa an'arivony an'arivony. tamin'ny taona 2026, ny ezaka rehetra izay hisy vokany tsara eo amin'ny toekarena amerikana midadasika kokoa.
Rehefa atambatra amin'ny boky fandefasana ankehitriny, United Airlines manantena ny hampiditra fiaramanidina vaventy vaovao 500 mahery: 40 amin'ny 2022, 138 amin'ny 2023 ary 350 amin'ny 2024 sy ny sisa. Midika izany fa amin'ny 2023 fotsiny, ny sambon'i United, amin'ny salan'isa, dia hanampy fiaramanidina tery vaovao iray isaky ny telo andro.
Ny kaomandin'ny fiaramanidina vaovao an'ny United - 50 737 MAX 8s, 150 737 MAX 10s ary 70 A321neos - dia ho tonga miaraka amin'ny atitany sonia vaovao izay misy fialamboly miverina amin'ny seza isaky ny seza, fitoeram-bokatra lehibe kokoa ho an'ny kitapo entin'ny mpandeha rehetra ary ny indostria haingana indrindra misy WiFi ao anaty sidina, ary koa fijery sy fahatsapana mamirapiratra miaraka amin'ny jiro LED. Manantena ny hanidina ny 737 MAX 8 voalohany miaraka amin'ny atitany sonia ity sidina ity ary hanomboka hanidina ny 737 MAX 10 sy ny Airbus A321neo amin'ny fiandohan'ny 2023.
Inona koa, United Airlines mikasa ny hanavao ny 100% -n'ny fiaramanidina maoderina ho an'ny fenitra amin'ny 2025, tetikasa retrofit tsy manam-paharoa izay, raha ampiarahina amin'ny isan'ny fiaramanidina vaovao manatevin-daharana ny fiaramanidina, dia midika izany fa hanafaka ny hazavana avo lenta i United. traikefa ho an'ny mpanjifa am-polony tapitrisa amin'ny hafainganam-pandeha tsy mbola nisy toa azy.
Ity baiko ity dia hampisondrotra ny totalin'ny laharam-pahabemaso isan'andro an'ny laharam-pahamehana sy ny seza misy manerana ny tamba-jotra amerikana avaratra an'ny fiaramanidina, ary koa ny isan'ny seza premium, samy United FirstSM ary Economy Plus®. Raha ny tokony ho izy dia manantena i United fa hanana seza premium eo ho eo isaky ny fiainganana any Amerika Avaratra amin'ny taona 53, fiakarana manodidina ny 2026% amin'ny taona 75, ary betsaka noho ireo mpifaninana rehetra any Amerika Avaratra.
"Ny vinan'ny United Next dia hanova ny traikefa amin'ny sidina United rehefa manafaingana ny orinasantsika hihaona amin'ny fitsanganan'ny sidina indray isika," hoy ny CEO CEO United Kir Kirby. “Amin'ny alàlan'ny fampidirana sy fanavaozana haingana ity fiaramanidina marobe ity miaraka amin'ireo atiny vaovao fanaovan-tsonia dia hanambatra serivisy manampy sy manampy amin'ny zavatra tsara indrindra any an-danitra izahay, manerana ny tamba-jotra manerantany. Mandritra izany fotoana izany, ity hetsika ity dia manasongadina ny anjara asa kritikan'i United amin'ny famelomana ny toekarena amerikana midadasika kokoa - antenaina fa ny fanatontosana ireo fiaramanidina vaovao ireo dia hisy fiatraikany ara-toekarena lehibe eo amin'ireo vondrom-piarahamonina arosonay momba ny famoronana asa, ny fandaniam-bolan'ny mpandeha ary ny varotra. ”